Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Man City Oo Liiska Ku Darsatay Judea Bellingham, Haaland Oo Badaley Go'ankiisa Suuqa, Dagaalka Cusub Ee Declan Rice Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaSuuqa Kala iibsiga Maanta: Man City oo liiska ku darsatay Judea Bellingham, Haaland oo badaley go’ankiisa Suuqa, Dagaalka Cusub ee Declan Rice iyo Qodobo kale
Suuqa Kala iibsiga Maanta: Man City oo liiska ku darsatay Judea Bellingham, Haaland oo badaley go’ankiisa Suuqa, Dagaalka Cusub ee Declan Rice iyo Qodobo kale
Manchester City ayaa ku dartay Judea Bellingham oo Borussia Dortmund ah liiska ay doonayso waxayna Liverpool kula tartami doontaa 18 jirka qadka dhexe ee England. (Daily Star)
Manchester United ayaa qarka u saaran inay caqabad kala kulanto Manchester City dagaalka loogu jiro saxiixa xiddiga khadka dhexe ee West Ham Declan Rice, 22 -jir, xagaaga soo aadan. (Thesun)
Weeraryahanka Norway iyo Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, oo 21 jir ah, ayaa dooneynin inuu ku degdego go’aan ka gaarista mustaqbalkiisa marka qandaraaskiisa lagu burburin karo wax ka yar 70 milyan oo ginni uu dhaco 2022. (90 Min)
Tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa sheegay inaysan jirin wax niyad jab ah oo kooxda soo wajahay ka dib markii ay ku guuldarreysteen inay Paris Saint-Germain kala soo saxiixdaan weeraryahanka reer France Kylian Mbappe oo 22 jir ah . (Goal)
Arsenal ayaa raadineysa tababaraha Leicester City Brendan Rodgers iyo tababaraha Nice Christophe Galtier haddii ay go’aansadaan inay bedelaan Mikel Arteta. (Teamtalk)
Daaficii hore ee Chelsea iyo England John Terry ayaa aad u danaynaya shaqada Nottingham Forest haddii halgamayaasha Championship -ka ay kala tagaan Chris Hughton. (Thesun)
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa sheegay inay ahayd “go’aan aad u fudud” inaanan u oggolaan garabka England Callum Hudson-Odoi, oo 20 jir ah, maalintii ugu dambaysay ee suuqa xagaaga. (Football.London)
Barcelona ayaa diiday inay la soo wareegto xiddiga qadka dhexe ee reer France Tanguy Ndombele, oo 24 jir ah, iyo daafaca reer Ivory Coast Serge Aurier, oo 28 jir ah, taasoo qeyb ka ahayd heshiiskii ay kaga iibinayeen Tottenham daafaca midig ee Brazil Emerson Royal . (Express)
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee weerarka Millwall Jed Wallace ayaa qandaraaskiisu dhacayaa xagaaga soo aadan, 27 jirka reer England ayaa xiiso ka helaya Brentford, Burnley, Crystal Palace, Newcastle United, West Ham iyo sidoo kale Celtic, Rangers iyo West Brom. (World League League)
West Ham ayaa isha ku heysa xiddiga qadka dhexe ee Preston North End Lewis Leigh, iyadoo Everton ay sidoo kale isha ku heyso 17 jirka reer England. (Footballinsider247)
Chelsea ayaa wadahadalo la yeelatay Karim Adeyemi oo 19 jir ah oo u dhashay Jarmalka saddex sano ka hor laakiin waxay ku guuldarreysatay inay gacanta ku dhigto weeraryahanka Red Bull Salzburg . (Express)